MiG သို့ 31 Firefox ကို
မေးခွန်း MiG သို့ 31 Firefox ကို
2 နှစ်ပေါင်း6months ago #449 by Dariussssss
ငါတဦးတည်းကဒီမှာရှိပါတယ်သိကြပေမယ့်မှသာ FS2004 ပါပဲ။
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: GODFREYE
2 နှစ်ပေါင်း6months ago #455 by Gh0stRider203
ပထမဦးစွာပယ်, တစ်ခု ACTUAL MiG သို့ 31 မဟုတ်ဘူး အရမ်းရယ်ရတယ်တဲ့စိတ်ကူးယဉ်ငှက်ဖြစ်ပါတယ်။
2 နှစ်ပေါင်း6months ago #456 by Dariussssss
Thew ရုပ်ရှင်ကယ့်ကိုမှိုင်းနဲ့တူ ... မှိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်သည် သာ. ကောင်း၏မျှော်လင့်ပါတယ်။
ငါ -31 ကြောင့်ခဲ့ပေမယ့်ငါဒီတစ်ခုကိုရှာဖွေကြည့်ပေမယ့်အဘို့ခဲ့သည် FSX.
2 နှစ်ပေါင်း6months ago #458 by Gh0stRider203
2 နှစ်ပေါင်း6months ago #459 by Dariussssss
ထိုအရပျမှထွက်စစ်ဆေးပါ။ တစ်စုံတစ်ဦးကအရမ်းရယ်ရတယ် ... ကြောင်းရုပ်ရှင်လူအားအလေးအနက်ထားစွဲဖြစ်ပါသည်
1 days ago2တစ်နှစ် #1210 by FlankerAtRicoo
0.984 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်